अनलाइन ह्याचरी व्यवस्थापन तालिम आयोजना हुँदै | Vetkhabar
Home Breaking News अनलाइन ह्याचरी व्यवस्थापन तालिम आयोजना हुँदै
अनलाइन ह्याचरी व्यवस्थापन तालिम आयोजना हुँदै
काठमाडौं । नेपालमै पहिलो पटक अनलाइन ह्याचरी व्यवस्थापन तालिम आयोजना हुने भएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त पोल्ट्री ह्याचरी विशेषज्ञहरुले उक्त तालिममा प्रशिक्षण दिने भएका छन् । उक्त तालिम एक हप्तासम्म चल्ने भएको छ । नेपाल ह्याचरी उद्योग संघसँगको सहकार्यमा भेट नेपाल नामक एक अनलाइन पोर्टलले उक्त तालिमको आयोजना गर्न लागेको हो ।
भदौ ३१ देखि असोज ६ गतेसम्म सञ्चालन हुने तालिममा सहभागी हुनका लागि अनलाइन फारम भर्नुपर्ने बताइएको छ । अनलाइन फारम भर्नका लागि https://forms.gle/tQzwYJZyQ9Bq67BXA अनलाइनमा जानु पर्ने छ । तालिममा सहभाग हुन रजिष्ट्रेशन शुल्कबापत प्रतिसहभागी रु. २ हजार तिर्नुपर्ने जनाएकाे छ । काेभिड १९ का कारण निषेधाज्ञा जारी रहेकाेले अनलाइनबाटै शुल्क बुझाउने र तालिम समेत अनलार्इमार्फत नै हुने भएकाे हाे ।
तालिममा सहभागी हुनेहरुले भेट नेपाल अनलाइनको ई–सेवाबाट शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ । उक्त शुल्क बुझाएको भौचर ह्वाट्स एपमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाे अायाेजकले जनाएकाे छ । कार्यक्रम समयतालिका प्राप्त गर्न https://vetnepal.com/article_d…/hatchery_management_training, विशेषज्ञ प्रशिक्षकहरू बारे बुझ्न https://vetnepal.com/article_d…/hatchery_management_training र अन्य जानकारीको लागि https://vetnepal.com/Training लिंकमा क्लिक गरेर जनकारी लिन सकिने अायाेजकका तर्फबाट डा. प्रकाश अधिकारीले बताएका छन् ।
Previous articleमल नल्याउने दुई ठेकेदारसँगको सम्झौता खारेज, साढे ९ करोड जमानत जफत, दुबै कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिने
Next articleकुखुरा पालक किसानको हित रक्षार्थ आधा दशकदेखि तैनाथ एक सिपाहीको कथा
सिमकोट गाउँपालिकाद्वारा २२ मासु पसलमा अनुगमन
बधशालाको अभावमा अस्वस्थकर मासु खाँदै विराटनगरवासी